Mugari weRussia akapfura achiyedza kuyambuka zvisiri pamutemo kubva kuMexico kuenda kuUSA
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Mugari weRussia akapfura achiyedza kuyambuka zvisiri pamutemo kubva kuMexico kuenda kuUSA
Armenia Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Iyo yekudhindisa sevhisi Tsika dzeUS uye Border Kudzivirirwa akataura kuti mumiriri weUS Border Patrol aburitsa pfuti yake-yakapihwa basa muchiitiko chinosanganisira mugari weRussia padhuze neLukeville, Arizona.
"Nguva dzinenge dza7: 15pm, mumiriri weBorder Patrol akapindura nyaya imwechete yaifungidzirwa yekuyambuka muganho zvisiri pamutemo kumabvazuva kweLukeville, Arizona. Panguva iyo mumiriri paakaedza kusunga nyaya iyi, pakamuka bongozozo, mumiriri akaburitsa pfuti yake, ikarova nyaya yacho, ”vakadaro vatori venhau.
"Nyaya iyi, mugari wemuRussia, akatakurwa neherikoputa kuenda kuchipatara chePhoenix kunorapwa kukuvara kusiri kwehupenyu. Nyaya iyi inoramba iri muchipatara panguva ino, ”basa rekudhinda rakawedzera.
“Mumiriri weBorder Patrol ari kupindura haana kukuvara zvakanyanya mukusangana uku. Iyo FBI uye CBP Kushandisa yeChisimba Chiitiko Timu parizvino iri kuongorora chiitiko ichi. Hakuna rumwe ruzivo rwuripo panguva ino, ”vezvekubudisa nhau vakataura.